Live Questions and Answers (7)… | " မနာပဒါယီ "
Live Questions and Answers (7)…
။ အချိန် 7/31/2010 04:57:00 PM
မနာပဒါယီ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အောက်ခြေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Live Questions and Answers ကဏ္ဍတွင် မေးဖြေထားချက် အချို့ကို အများဖတ်၍ အမြတ်ဖြစ်စေဖို့်၊ နဲနဲပဲဖြစ်ဖြစ် အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရှိနိုင်ကြစေဖို့အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
4 Jul 10, 07:07 PM
အရှင်ဘုရား တပည့်တော် လာလည်သွားပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် အွန်လိုင်းပေါ် လာလည်ရင်း အများကျိုးအတွက် မေးခွန်းလေးတစ်ခု လျှောက်ထားပါရစေ။ မသိမှု အ၀ိဇ္ဖာအောက်မှာ ကျင်လည်နေကြရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုတော့ရှိတာ သေချာပါတယ်ဘုရား။ အ၀ိဇ္ဖာကဖုံးလိုက် တဏှာကချော့လိုက်နဲ့ ဒီသတ္တ၀ါတွေဟာ ၃၁ဘုံထဲက မလွတ်နိုင် မကျွတ်နိုင်ဖြစ် နေရတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်ဘုရား။
6 Jul 10, 06:23 AM
မနာပဒါယီ >>> ထွန်းထွန်း
သတ္တ၀ါတွေကို ၃၁ဘုံ သံသရာမှာ တ၀ဲလည်လည်နဲ့ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင်၊ သံသရာရှည်ကြာအောင် သံသရာချဲ့ထွင်ပေးတဲ့ တရားတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီတရားတွေက တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ ပပဉ္စတရားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားသုံးပါးဟာ သတ္တ၀ါတွေကို သံသရာမှာ အရှည်ကြာအောင် သံသရာနယ်ချဲ့နေတဲ့ တရားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားတွေ ရှိနေသမျှ ဒီသုံဆယ့်တစ်ဘုံထဲက မလွတ်နိုင်၊ မကျွတ်နိုင် ဖြစ်နေကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားတွေကြောင့် သတ္တ၀ါတွေဟာ အ၀ိဇ္ဇာတွေများ၊ တဏှာတွေ ပွားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပပဉ္စတရားသုံးပါးကို ဉာဏ်နဲ့ မဖြတ်နိုင်သေးသမျှတော့ ဘုံဘ၀မှာ ဆုံကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံသရာဘုံဘ၀မှ လွတ်မြောက်လိုသူတွေဟာ ဒီသံသရာနယ်ချဲ့ တရားများကို ဉာဏ်နဲ့ အမြစ်ပြတ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
20 Jul 10, 12:09 AM
kyaw ye htut
ဆရာတော်ကို တပည့်တော် တစ်ခုမေးချင်လို့ပါ။ သူတစ်ပါးက တပည့်တော်ဆီက ပိုက်ဆံလာချေးလို့ ပေးလိုက်တယ်ဘုရား။ သူတစ်ပါးက ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးသည်ဖြစ်စေ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘုရား။ မပေးလည်း ရပါတယ်ဘုရား။ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံချေးသွားတဲ့သူက သံသရာ ကြွေးခံရလားဘုရား။ တပည့်တော်က ခွင့်လွှတ်တယ်ဘုရား။ တဆိတ်လောက်သိပါရစေ။
20 Jul 10, 12:52 AM
မနာပဒါယီ >>> kyaw ye htut
ဒီနေရာမှာ ပိုက်ဆံချေးသွားသူရဲ့ စိတ်စေတနာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သူကစေတနာ အလိုဆိုးနဲ့ ချေးပြီးတမင်သက်သက် မပေးဘဲ နေခဲ့တာ၊ ရှောင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ သံသရာကြွေး ခံရတတ်ပါတယ်။ ချေးလိုက်တဲ့သူက ဘယ်လိုပဲ ခွင့်လွှတ်ခွင့်လွှတ် ဒီအမှုကို စတင်ကျူးလွန်တဲ့ ပိုက်ဆံချေးသွားသူ ကာယကံရှင်က အစကတည်းက မကောင်းတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် ပြန်ပြီးဝန်ချတောင်းပန်ကာ အကျိုးအကြောင်း ပြောဆိုပြီး ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းချက် တစ်ခုခုကို မပေးဘဲနေမယ်ဆိုရင် သူ့မှာအပြစ်ရှိနေပြီး ဒီအပြစ်ကို ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။ ချေးပေးသူက ခွင့်လွှတ်ပေမယ့် ချေးသွားသူက စေတနာ အလိုဆိုးနဲ့ လုပ်သွားခဲ့တာဆိုရင် တစ်ဘက်က ခွင့်လွှတ်ပေမယ့် တစ်ဘက်မှာတော့ သူ့စေတနာအတိုင်း ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံး တောင်းပန်ပြီး ခွင့်လွှတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်မရှိပါဘူး။ သံသရာကြွေး မပါနိုင်ပါဘူး။
27 Jul 10, 12:26 AM
မျှားလာတဲ့ ငါးတွေကို သတ်ပြီး လက်ဆောင်လာပေးရင် စားသင့်ပါသလားဘုရား။
မမှန်စွပ်စွဲခံရလို့ စိတ်ဆင်းရဲပြီး သတ်သေသွားတဲ့ ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးအကြောင်း အင်တာနက်မှာ ပြန့်လာလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီလိုဝဋ်ကြွေးတွေဟာ ရှောင်လွှဲလို့ လျော့ပါးအောင်ပြုလို့ မရနိုင်ဘူးလားဘုရား။
27 Jul 10, 02:21 AM
သတ်ပြီးလာပေးတဲ့ သူကကိုယ့်အတွက် တမင်ရည်ရွယ်သတ်ပြီး လာပေးခြင်း ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ အကယ်၍ ကိုယ့်အတွက် တမင်ရည်ရွယ်ပြီးသတ်တာ၊ အဲဒီလို ကုိုယ့်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးသတ်တာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သိနေတယ်ဆိုရင် မစားကောင်း၊ မစားသင့်ပါဘူး။
၀ဋ်ကြွေးတွေ ရှောင်လွှဲလျော့ပါးအောင် လုပ်ဖို့နဲ့၊ အကြွင်းမဲ့ကုန်သွားအောင် လုပ်ဖို့ကတော့ အရိယာမဂ်ဉာဏ်နဲ့ပဲ လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သေတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်စတဲ့ ဉာဏ်တွေနဲ့ပဲ ၀ဋ်ကင်းပြတ်ရာကို လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၀ိပဿနာ အားထုတ်ပြီး အရိယာမဂ်ကို အရယူကာ ၀ဋ်ကြွေးတွေ လျော့အောင် ကုန်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းမရှိပါဘူး။
29 Jul 10, 05:24 AM
Ashinphaya, if we cut down the tree and nat (yokasoe) lost his shelter, is itasin? (pardon that I cannot type Myanmar.)
29 Jul 10, 01:22 PM
မနာပဒါယီ >>>That Aung:
သစ်ပင်တိုင်းမှာတော့ ဒီနတ်တွေ ရုက္ခစိုးတွေ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမှမရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ရင်ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် နတ်စတဲ့ ဒီသစ်ပင်ကို အမှီပြုနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိမှန်းသိရဲ့နဲ့ စေတနာပါပါနဲ့ သူတို့နေရာပျောက်အောင် ခုတ်ရင်တော့ ဒါဟာ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရှိမှန်းသိရဲ့နဲ့ တစ်ခြားအကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် မဖြစ်မနေ ခုတ်ရတဲ့ အနေအထားလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုးမှာ မခုတ်ခင် ကြိုတင်နေရာပြောင်းနေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပြီး ခုတ်လှဲရင်တော့ အပြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သစ်ပင်တိုင်းမှာ နတ်စတဲ့ မြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတာ မသိရတဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်လို့ သစ်ပင်တွေ ခုတ်တော့မယ်ဆိုရင် မခုတ်ခင် သူတို့အသိုက်အမြုံ နေရာလေးတွေ မပျောက်ပျက်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ကြိုတင်အသိပေးပြီး တစ်ခြားတစ်နေရာကို ပြောင်းရွေ့ဖို့ မေတ္တာရပ်ကာ ခုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
30 Jul 10, 06:06 AM
ဘုန်းဘုန်းဘုရား... အချို့တောရွာတွေမှာ ဝက်သားယူမလားလို့ ဝက်မွေးသူက မသတ်ခင် ကြိုပြီး ဝက်သားဝယ်မယ့်သူတွေ လိုက်စပ်ပါတယ်။ တစ်ပိဿာယူမယ်၊ နှစ်ပိဿာယူမယ်စသဖြင့် ယူမယ့်သူတွေ တစ်ကောင်စာလောက် ရတော့မှ ဝက်ကိုပေါ်ပါတယ်။ ယူမယ်လို့ ကြိုပြောရင် ပါဏာတိပါတ သင့်လားဘုန်းဘုန်း။ ကွန်သွားပစ်တဲ့သူတွေ တောလိုက်တဲ့ လူုတွေဆီက ငါးတွေ အကောင်ဗလောင်တွေကို ညနေ စောင့်ဝယ်တာရော ပါဏာတိပါတသင့်ပါလား။ ဝယ်သူရှိလို့ ကုန်သွားရင် နောက်နေ့တွေ ကွန်ဆက်ပစ်၊ တောထပ်တိုးပြီး ရောင်းဖို့ ထပ်ရှာကြလို့။ အဲဒါကို စားစရာ မရှိလို့ ဝယ်မိရင် ပါဏာတိပါတ သင့်ပါလား။
30 Jul 10, 03:29 PM
၂။ သတ္တ၀ါဟူသော အမှတ်လည်းရှိခြင်း။
၃။ သေစေလိုသော စိတ်ရှိခြင်း၊
၄။ သတ်အံသော လုံ့လ ပယောဂရှိခြင်း၊
၅။ လုံ့လပယောဂကြောင့်သေခြင်း ဆိုတဲ့ ဒီအင်္ဂါ (၅)ပါးနဲ့ ပြည့်စုံရင် ပါဏာတိပါတကံ ထိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတ်တာလည်း ကိုယ်တိုင်သတ်ခြင်း သူတပါးကို သတ်စေခြင်းစသဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိရာမှာ ပါဏာတိပါတကံ ဖြစ်နိုင်ခြင်း အကြောင်း (ပယောဂ) ရှစ်မျိုးမှာ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ သတ်မိပြီး အထက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေရင် ကံမြောက်ပါတယ်။ အဲဒီ ပယောဂ (၈)မျိုးကတော့
(၁) သတ္တ၀ါကိုရည်မှတ်၍ သတ်ဖြတ် ထိုးခုတ်ခြင်း၊
(၂) သတ္တ၀ါတစုံတခုကို ရည်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဘာကောင်သေသေဟု ပစ်ခတ် ထိုးခုတ်လိုက်ခြင်းမျိုး၊
(၃) ကိုယ်တိုင် သတ်ပုတ် ထိုးခုတ်ခြင်း၊
(၄) သူတပါးကို စေခိုင်းခြင်း၊
(၅) အဝေး၌နေသော သတ္တ၀ါကို မြှား လှံ သေနတ် စသည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊
(၆) အမြဲတည်နေ၍ သေစေနိုင်သည့် တွင်းတူးထားခြင်း ဆေးဝါး အစီအရင် ထားခြင်း စသည့် အရာမျိုး၊
(၇) ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင် ဂါထာမန္တရား စသော အစီ အရင်တို့ဖြင့် သေအောင်လုပ်ခြင်း၊
(၈) မိမိ တန်ခိုးဖြင့် သတ္တ၀ါတို့ကို သေစေခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာ)
ဒီအဖွင့်တွေအရ မေးခွန်းရှင် သိလိုတဲ့ အမေးနဲ့ ညှိယူနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းရှင် မေးထားသလို သားသတ်သမားများ၊ ငါးဖမ်းသမားများဟာ ဒီလိုကြိုတင်မှာယူသူ၊ စားသုံးသူတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လုပ်နေရတာဖြစ်လို့ မှာယူသူတွေဟာ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက်နေသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညှိကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတ်ခိုင်းခြင်း မဟုတ်သလို သတ်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ်ကခိုင်းလို့ ကိုယ့်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သတ်နေကြတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်အနေနဲ့ ပါဏာတိပါတ ကံမမြောက်ဘူးလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုစားသုံးသူတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့သတ်နေရတာဖြစ်လို့ ကိုယ်လည်းပယောဂ မကင်းဘူးလို့ ဆိုချင်ဆိုနိုင်ပေမယ့် တိုက်ရိုက်သတ်တဲ့ ပါဏာတိပါတကံတော့ မမြောက်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားလို့ သတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ကံမြောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်းရှင် အမေးထဲကလို ၀ယ်မယ့်သူတွေလိုက်စပ်ပြီး ၀ယ်သူပြည့်မှ သတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ ကိုယ့်ပယောဂ မကင်းတဲ့အတွက် ကံမြောက်နိုင်ပါတယ်။ လိုက်စပ်တဲ့ သူတွေကတော့ ကိုယ်မဟုတ်လဲ တစ်ခြားသူတွေကို လိုက်စပ်ပြီး အရေအတွက်ပြည့်ရင် သတ်မှာဖြစ်လို့ လိုက်စပ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ကိုယ်မပါမိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကိုတော့ ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ သူ့အလိုလို သတ်ပြီးသား၊ သေပြီးသားတွေကို လိုက်စပ်လို့ ၀ယ်ယူတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ကံမမြောက်ပါဘူး။ တံငါသည်တွေ ငါးဖမ်းကအပြန် စောင့်ဝယ်တဲ့ အပိုင်းမှာလည်း ငါးအရှင်တွေကို ကိုယ်ကတိုက်ရိုက် ၀ယ်ယူပြီး သတ်စေတယ်ဆိုရင် ကံမြောက်နိုင်ပြီး ပါလာတဲ့ သေပြီးသား အသေတွေကို ၀ယ်ရင် ကံမမြောက်နိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုပါပဲ။ ဈေးထဲမှာ ရောင်းနေတဲ့ အရှင်တွေကို ကိုယ်ကလက်ညှိုးထိုးပြီး တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ သတ်စေတဲ့အပိုင်းမှာ ပါဏာတိပါတ ကံဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သတ်ပြီးသား အသေတွေကို ၀ယ်ယူမှုမှာတော့ ကံမမြောက်နိုင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်လိုစားသုံး သူတွေကြောင့် သားသတ်သမားတွေ သားသတ်နေရတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်မှာလည်း ပါဏာတိပါတကံ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကိုယ့်အနေနဲ့က စေတနာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သေစေလိုတဲ့ စိတ်ရှိပြီး တိုက်ရိုက်လုံ့လပြုတာ၊ တိုက်ရိုက်စေခိုင်းတာ၊ ကိုယ်ကလုံလ ပယောဂပြုလို့ ဒီသတ္တ၀ါတွေ သေရတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပါဏာတိပါတကံ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ အသားစား သူတွေအနေနဲ့ အရှင်လတ်လတ်တွေကို ၀ယ်ယူစားသုံးမှု မဖြစ်စေဖို့၊ အရှင်လတ်လတ် ရောင်းချမှုအပိုင်းမှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး သတ်ခိုင်းတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်လိုသူတွေရှိလို့ သတ်ကြတာ ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ပယောဂမပါဘဲ သူတို့သတ်ပြီးသား အသားကို ၀ယ်ယူစားသောက်မှု အပိုင်းမှာတော့ ပါဏာတိပါတ ကံမမြောက်နိုင်ပါဘူး။
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၁၁)...
၀ါတွင်းကာလ အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခု ၀င်ကြည့်ကြစို့…
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၁၀)...
Prostitute နှင့် ကာမေသု…
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၉)...
၀ိပဿနာ ရှုနည်း၊ မူသေစည်း…
ပြောင်းသွားပေမယ့် အကောင်းပြောင်း မဟုတ်ပြန်တော့…
ဥပုသ်နေ့မဟုတ်တဲ့ ဥပုသ်သီလ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ရွေးခ...
ဥပုသ်သီလ၊ မုသာဝါဒနှင့် အလှူဒါန…
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၈)...